Fumana okanye ube LGBTUmcebisi weQ Q wobuchule-ngaphandle kweBüro
Ikhaya » Fumana okanye ube LGBTQ Umcebisi ngobungcali
Fumana okanye ube LGBTQ Umcebisi ngobungcali
Novemba 19, 2019 (ehlaziyiweyo ngoNovemba 19, 2019) E papashwe ngu UDennis Velco
Ngaba ungathanda ukunceda abanye baqhubele phambili nomsebenzi wabo wobugcisa kunye noosomashishini ngokuba ngu LGBTQ umcebisi?
Okanye mhlawumbi ungathanda ukuba nomcebisi kwaye ungathanda ukukhangela i LGBTUmntu onobuhlobo Q ukukunceda kwikhondo lakho lomsebenzi nakwiinzame zakho zeshishini.
Ungazichaza zombini kwiprofayili yakho yobuchwephesha kunye nezoosomashishini qiniseka ukuba ugcwalisa kangangoko kunokwenzeka ukuvula onke amanqaku e-OutBüro ukuze ufumane uninzi kuluntu kwaye bathathe inxaxheba kwaye bazibandakanye nabanye.
Ngelixa uhlela imowudi, skrolela ezantsi ude ubone icandelo loMcebisi. Yenza ukhetho lwakho kwaye ugcwalise iinkcazo emva koko uqiniseke ngokugcina. Kwakhona, yenza ukhetho malunga nokuba ngubani onokulujonga olu lwazi ukusuka ngokwakho ukuya kumalungu esayithi angene kuluntu kuphela (intanethi inokukhangelwa) njengakuyo yonke intsimi kwiprofayili yethu.
Nje ukuba ugqibezele ubuncinci i-60% yeprofayile yakho ukuvula amalungu aMalungu oPhando, unokukhangela amalungu abonisa ukuba bafuna umcebisi okanye abo bavulekileyo ukuba babe ngumcebisi. Yenza olunye ukhetho olufana nomzi mveliso, indawo kunye nokunye ukunciphisa ukukhangela. Ukuba ufumene umntu xa usebenzisa umyalezo wesiza kwaye uqhagamshele ngesicelo sabahlobo. Thatha apho.
Udidi: Kwenziwa kanjani
tags: LGBT Mentor, LGBTUmcebisi weQ